Rufu rweSangano reRekodhi | Martech Zone
Chitatu, December 1, 2010 China, July 2, 2015 Douglas Karr
Iyo nharaunda iri morphing kune vamiririri.
Muvhiki rapfuura, ndanga ndiri pane asingasviki mashanu ekutengesa mafoni uko tarisiro yatove nemupi webasa, vanga vachisarudza mupi, kana kuti vatove neanoshanda. Isu takabatirwa neimwe kambani kuwedzera yavo yekutsvaga injini chinzvimbo. Mushure mekuongorora saiti yavo pasi peminiti, ndakavaudza kuti chingave chiitiko chakakura chakapihwa yavo yekare CMS. Vakataurirana nesangano rakavavakira saiti yavo uye iyo agency vakakurumidza kuvapa imwe quote kuti vasimudzire kune itsva CMS. Nei iyo agency isina kuvazivisa kare?
Imwe kambani yakaita kuti isu tiite nekushingairira kwakaringana pane blogging chikuva. Dambudziko raive rekuti mibvunzo yavaive nayo yanga isingaenderane nesimba repuratifomu. Sei vanga vasingazive nezvekutengesa mapoinzi epuratifomu? Yakanga iri yekuchimbidza kutengesa kufona uko timu yanga isina kunyatso kuona zvinodiwa netariro kana zviwanikwa.
Tiri kuita kushingairira kwakakodzera kune imwe kambani kuti itarise SaaS application iyo yavari kutsvaga kutenga. Iyo kambani yakatiroja isu nekuda kweruzivo rwedu munzvimbo yeSawaS uye ruzivo rwehuwandu hwezvishandiso pamusika. Vakanga vaine yavo yemukati chigadzirwa uye tekinoroji zvikwata - asi zvakadaro vaida a fresh tarisai.
Hatisi vako chaiwo agency… kana saka ndakafunga. Mune yazvino Online Media Ripoti kubva eConsultancy, ivo vaona maitiro mune vamiririri uye mashandisiro avashandisi. Mhedzisiro yacho inoshamisa ... uye inozivikanwa!
Hakuchazovipozve Inopindirana Agency yeRekodhi - Sezvo mafemu ehurumende achibatanidza zviwanikwa zvavo nekugogodza masilosi, hakuzove nekudikanwa kwemushambadzi kusarudza dhijitari se "agency yerekodhi" (Izvi zviri kunze kwekuti pfungwa ye "AOR" yarasikirwa nerevo sezvo vashambadziri vanosarudza kufambisa mabhajeti avo ekushambadzira pakati pezvitoro zvakasiyana siyana.) Sezvo madziro pakati pechinyakare neanopindirana achidonha, zvikamu zvemadhijitari zvinomanikidzwa Sarudza pakati pekuzvitsigira ivo pachavo mukati meakakura ejeni masisitimu kana kupokana nemaitiro echinyakare kutonga kwakakura kweayo ega ma media account.
Rudzi rwemakwikwi pakati digital kushambadzira zvitoro ichawedzera - Kukweva kwehondo pakati pechinyakare nepamhepo kutenga midhiya kucharatidzirwa pasirese yakatambanuka yekutengesa. Mune mamwe mazwi, sevatengi vanoda nzira ye "yakazara" yekushambadzira, iyo hondo yekutungamira mushandirapamwe ichaitwa kwete chete nevarume nevakadzi, asi nePR mafemu uye dzimba dzekugadzira dhijitari uye vezvemagariro venhau zvakare.
Kubuda kwe Yakabatanidzwa Agency - Sezvo idzi hondo dzichitamba, iyo hombe inobata chimiro chekambani ichatsvaga kukwidziridza zvikamu zvayo zvakasiyana mukubatana zvisina kumboitika kare. Ehezve, chikonzero chakabata makambani chakaburitsa mumabasa mazhinji ekushambadzira, kubva mukugadzira, kuronga uye kutenga, kuenda kuPR kushambadziro uye makambani ekudyara kwaive kukurudzira kukuru kweGestalt mhedzisiro, uko iyo yakazara iri huru kupfuura huwandu hwayo zvikamu. Pasina mubvunzo kutaura, kunyangwe angangoita makore makumi matatu achishanda achienda kune iyo modhi, makambani mashoma akabata anogona kutaura kuti awana ichi chinangwa, kunyangwe nzira dzakaitwa zvechokwadi.
Kunze neduramazwi rekare, mukati neiyo nyowani - Munguva yakapfuura, mazwi akadai se "GRPs," "maonero" uye "mabhatani," akashanda seyakaenzana muyero wevateereri maererano nekutungamira mashandisiro uye kuona budiriro yemushandirapamwe. Kukosha kwemashoko aya hakuzove kwakakosha. Ivo vakakodzera kutsiviwa nepfungwa dze "kukosha kwehupenyu hwese," "manzwiro / kunaka" uye "simba." Kunyangwe iko kushandiswa kwe "vateereri" kwakagadzirira guruva renhoroondo, sezvo zvichiratidza boka revatambi revanhu. Munguva yeInternet yeku "kusendamira kumberi" munhau imwe chete nekusimuka kwenzanga, izwi rakanyatso tsanangura vatengi mutengesi anoda kusvika rinenge riri "vatori vechikamu."
Rondedzero yakatorwa kubva ku Pamhepo Media Chirevo kubva kuConsultancy.
Ikoko ndiko HighbridgeKukura kwave kuri… mu Yakabatanidzwa Agency nzvimbo. Isu tave muyananisi pakati pemapoka ekushambadzira uye vanopa masevhisi uye zvigadzirwa zvavo, vakwikwidzi vavo, vatengi vavo, tarisiro yavo, vatengesi vavo, mafemu avo ePR nemasangano avo. Ino inguva inonakidza kwatiri uye yakakura kuona kuvimbiswa kwemhando yedu yebhizinesi mune uyu mushumo.
Kana iwe uri agency - inguva yekuchinja magiya, kunyangwe zviome sei. Unofanirwa kushanda nevamwe vatengesi vane hunyanzvi hwakasiyana… kunyangwe paine kuwanda mukupa. Coopetition iri mukati. Kana iwe uri kambani - inguva yekufungazve yako Agency of Record uye tora mukana wekusiyana kwevashandi kunze uko vanogona kukubatsira iwe kukunda matambudziko e mifananidzo itsva.
Positi yakanaka! Nakidzwa nazvo uye unobvumirana nemapoinzi ako akakosha.
Gumiguru 3, 2012 pa 9:54 AM
Ndakanakidzwa chaizvo nepost iyi Douglas. Hapana chatinoona kunze kwezvinhu zvakanaka pese patinosvika kune imwe agency.